COVID - 19 ကာလမှာ လုပ်ငန်းကို ဘယ်လိုစီမံကြမလဲ?
အခုလို COVID-19 ကာလမှာ Social Distancing Prevention ကြောင့် လုပ်ငန်းတော်တော်များမှာ ဝင်​​ငွေကျပြီး စီးပွားရေး အနည်းနဲ့အများထိခိုက်ပါတယ်။
Matrix အနေနဲ့ ဒီအပတ်မှာတော့ မသေချာဘဲ စီးပွားရေးကျဆင်းတဲ့ အခုအချိန်ကာလမျိုးမှာ သင်တို့ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းကို အတတ်နိုင်ဆုံး အထိမနာအောင် စီမံနိုင်မယ့် နည်းလမ်း၅ချက်ကို မျှဝေလိုက်ရပါတယ်။
2.Pay attention to cash flow
3.Makealist of all mandatory v. nice-to-have expenses
4.Invest in Marketing
5.Apply for Government Funding
လုပ်ငန်းနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ ကိန်းဂဏန်းတွေ သိထားပါ။
အကြောက်တရားနဲ့ မသေချာမှုတွေ ကြုံတွေ့ရတဲ့ အချိန်တွေမှာ လုပ်ငန်းရဲ့ ကိန်းဂဏန်းအချက်အလက် တွေကို သိထားဖို့ပိုလိုပါတယ်။
အနည်းဆုံးတော့ ငွေကြေးအချက်အလက် စုစည်းထားတဲ့ အောက်ပါ အဓိက စာရင်း၃ခု ကို သိထားသင့်ပါတယ်။
၁။ Balance Sheet လို့ခေါ်တဲ့ လုပ်ငန်းရဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှု၊ အကြွေး၊ အရင်းတွေပါတဲ့ စာရင်း၊
၂။ Profit & Loss Statement. လို့ခေါ်တဲ့ အချိန်ကာလတစ်ခုရဲ့ ရောင်းအား၊ ကုန်ကျစရိတ်၊ အမြတ်ငွေ တွေကိုဖော်ပြတဲ့ စာရင်း၊
၃။ Cash Flow Statement လို့ခေါ်တဲ့ အမှန်တကယ် ဝင်ငွေ၊ထွက်ငွေပြ စာရင်း
ဘဏ္ဍာရေးစာရင်းများရဲ့ ချိတ်ဆက်မှု တွေ နှင့် financial ratio တွေအကြောင်းကိုသိရှိချင်တယ်ဆိုရင် တော့အောက်ပါလင့်ခ်မှာ ဝင်ရောက် လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
* Register for our upcoming free webinar: Financial Ration Analysis
လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်တဲ့ မိတ်ဆွေတွေ သိထားတဲ့အတိုင်း လုပ်ငန်းတွေမှာ အမြတ်ငွေထက် ငွေဝင်ငွေထွက်က ပိုအရေးကြီးပါတယ်။ ငွေမကျန်တော့ရင် လုပ်ငန်းမလည်ပတ်နိုင်ဘဲရပ်တန့်သွားပါလိမ့်မယ်။
ဒါကြောင့် လုပ်ငန်းမှာ ငွေဘယ်လောက်ကျန်လဲ ဘယ်သူတွေကိုပေးဖို့ ကျန်လဲဆိုတာ စစ်ဆေးသင့်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် လိုအပ်ချိန်မှာ ငွေမပေါ်လာတာမျိုးမဖြစ်ရအောင် အောက်ပါအချက်တွေ လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။
(က)ဝင်ငွေရလမ်းတွေကို အသိအသာမြင်နိုင်အောင် ​ဖော်ထုတ်ပါ။ ပြီးတော့ ဘယ်လိုပြောင်းလဲနိုင်လဲ ဆိုတာကို မှန်းဆထားပါ။
(ခ)ပေးရမှာသေချာတဲ့ ကုန်ကျစရိတ်တွေ၊ အကြွေးတွေသာမက ပေးရနိုင်ချေရှိတယ့် စရိတ်တွေကို သိအောင်လုပ်ထားပါ။
ဥပမာ ဝန်ထမ်းလခ၊ ရုံးခန်းငှားခ၊ ကုန်ကြွေး စတာတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
(ဂ) ​ငွေဝင်​ငွေထွက် ခန့်မှန်း​ချေစာရင်းကို အ​ခြေအ​နေ ၃ ခု အတွက် ဆွဲထားပါ။ အကောင်းဆုံးအခြေအနေ ( the best case)၊ ဖြစ်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေ(expected or trend from reality) ၊ အဆိုးဆုံးအခြေအနေ (the worst case)​တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။
ပြီး​​​တော့ အဲ့ဒီအ​ခြေအ​နေတစ်ခုစီတိုင်းအတွက် ဖြစ်လာရင် ဘယ်အ​ရာ​တွေကို ​လျှော့ချရမလဲကို ကြို​တွေးထားပါ။ မဖြစ်ခင် ကြို​တွေးထားမှသာ ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာ ​ခေါင်းပူမမိ ခံစားချက်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်ပြီး (emotional မလွှမ်းမိုးဘဲ) ဓမ္မဒိဌာန်ကျကျ Logical ဖြစ်ဖြစ် ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Makealist of all mandatory vs nice-to-have expenses
မကုန်မဖြစ် ကုန်ရမယ့်စရိတ်နဲ့ မကုန်လည်းရမယ့်စရိတ် ​တွေကို စာရင်းပြုစုပါ။
မကုန်လည်းရမယ့် စရိတ်​ (Nice-to-have expenses) တွေဆိုတာက လုပ်ငန်းအသက်ဆက်ဖို့ အတွက်​ဆို ​လျှော့ချရမယ့် စရိတ်​​တွေကို ဆိုလိုပါတယ်။ သူတို့​တွေက လုပ်ငန်းပုံမှန်လည်ပတ်တဲ့အချိန် သက်​တောင့်သက်သာက​နေ အကျပ်တည်းဖြစ်ချိန်​​​ ရောက်သွားရင် မကုန်မဖြစ် (Mandatory) စရိတ်​တွေနဲ့ ခွဲခြားသိနိုင်ဖို့က မလွယ်ကူပါဘူး။ Nice to have expenses ​​တွေက လုပ်ငန်းလည်ပတ်တဲ့ Process ကို မရပ်တန့်သွား​စေပါဘူး။ ​လျှော့ချလိုက်ရင် အများဆုံး​တော့ အလုပ်လုပ်ရတာ ခက်ခဲသွားမယ်။
ဥပမာ အလုပ်မှာသုံးတဲ့ကားက ချို့ရွင်းနေပြီ၊ သုံးလို့​တော့ရနိုင်​သေးတယ်။ ကားအသစ်​လဲတာ​လောက်​တော့ မ​ချောမွတ်ဘူး။ ဒီလိုအချိန်မျိုးဆို Nice to have expenses ဖြစ်တဲ့ ကားလဲတာမျိူးကို ​​ရှောင်ကျဥ်သင့်ပါတယ်။
Mandatory Expenses ​တွေကို မှားမ​လျှော့ချဖို့လည်း အ​ရေးကြီးပါတယ်။
ဥပမာ ကုန်​ကြွေးရှင်​တွေရှိမယ် Supplier ​တွေကို​ပေးရမယ့် ပမာဏ​တွေရှိမယ်။
ဒါကကိုယ်တစ်​ယောက်တည်း ဆုံးဖြတ်ပြီး ​လျှော့လို့မရပါဘူး။ ​လျှော့လိုက်ရင် လုပ်ငန်းနစ်နာမယ်၊ အဆိုးဆုံး ယုံကြည်မှု ပြတ်ပြားပြီး ​ရှေ့ဆက်လို့မရနိုင်​တာမျိုးထိဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဒါ​ကြောင့် supplier ​တွေသာမက ကိုယ့်လုပ်ငန်းက ရစရာရှိတဲ့ အ​ကြွေး receivables ၊ customer ၊ partner ​တွေကို ကိုယ့်ဖက်ကကြိုတင် နှစ်ဦးနှစ်ဖက် ​ပြေလည်​အောင် ညှိနှိုင်းသင့်ပါတယ်။
သတိထားရမှာက အကုန်လုံး စီးပွား​ရေးကျ​နေနိုင်တယ့် အချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
Marketing မှာ မြှုပ်နှံပါ။
​ငွေ​​ကြေးလည်ပတ်ဖို့ခက်ခဲတဲ့ အချိန်မှာ Marketing အတွက် ပိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာ စစချင်းကြားရရင် မအပ်စပ်သလို ခံစားရမှာပါ။ ​ငွေဝင်ဖို့ အ​ကောင်းဆုံးနည်းလမ်းက ထုတ်ကုန်​​ရောင်းချခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအတွက် ​ဒါလုပ်ရင် ဒီ​လောက် result ရတဲ့ ​အရင်တုန်းက သက်​သေပြထားတဲ့ အောင်မြင်တဲ့ Marketing Effort ကို ပိုအား​စိုက်ထုတ်ပြီး လုပ်သင့်ပါတယ်။
Marketing က ကျယ်ပြန့်ပြီး လုပ်ငန်းတိုင်းမှာကိုယ်ပိုင် မတူညီတဲ့ effort ​တွေရှိပါတယ်။ Advertising လား Relationship Building လား စတာ​တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။
ပိုကုန်ကျမယ့် စမ်းသပ်မှုမျိုးကို​​တော့ တန်ရဲ့လား လိုချင်တဲ့ အကျိုးသက်​ရောက်မှုရှိရဲ့လား ဆိုပြီး ဆင်ခြင်သင့်ပါတယ်။
အတိုးနှုန်းသက်သာတဲ့ ​ချေး​ငွေ ​လျှောက်ပါ။
အခု မြန်မာနိုင်ငံ​အစိုးရကနေ အတိုးနှုန်းသက်သာတဲ့ ​ချေး​ငွေ​တွေရှိပါတယ်။ 2019-2020 Budget ရဲ့ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းကို COVID crisis အတွက်ပန့်ပိုး​ပေးမယ်လို့ ကြားသိရပါတယ်။
​အောက်ပါ Link မှာ​​ချေး​ငွေ Billon ၁၀၀ ကျပ်အ​ကြောင်း​ဆွေး​​နွေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
မိတ်​​ဆွေတို့လည်း လက်ရှိမိမိတို့လုပ်ငန်းမှာကျင့်သုံး​နေတဲ့ နည်းလမ်း​ကောင်း​တွေ၊ ထင်မြင်ချက်​​တွေကိုလည်း ​အောက်commentမှာ မှတ်ချက်​​ ​ပေးသွားပါဦး။
​​နောက်အပါတ်​တွေမှာလည်း မိတ်​ဆွေနှင့်မိတ်​ဆွေတို့လုပ်ငန်းအတွက် အကျိုးရှိမည့် နည်းလမ်း​ကောင်း အကြံဥာဏ်​ကောင်း​များ ဆက်လက်မျှဝေမှာမလို့ Page ကို Like and Follow လုပ်ထားဖို့ ထပ်မံ အကြံ​ပေးလိုက်ရပါတယ်။
​အခု​ဖော်ပြခဲ့တဲ့နည်းလမ်း​တွေကို အသုံးပြုပြီး မိမိတို့လုပ်ငန်း​တွေကို ​ကောင်းတဲ့ဖက်ကို ဦး​ဆောင်နိုင်ဖို့ Matrix Solutions Business Advisory Team မှ ဆုမွန်​ကောင်း​တောင်း​ပေးလိုက်ရပါတယ်။
Reference : Bean Ninja